သြဇာလွှမ်းမိုးမှုသည်စကားဝိုင်းများနှင့်မရောက်ရှိပါ။ | Martech Zone
တနင်္လာနေ့, မေလ 12, 2014 တနင်္လာနေ့, မေလ 12, 2014 Douglas Karr
နောက်တစ်ခါထပ်လုပ်တယ် ငါအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအားကစားပွဲများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်ကျွမ်းကျင်သောအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ကပြောနေတာဖြစ်ရပ်တစ်ခုမှာကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တယ်။ သူကစက်မှုလုပ်ငန်းဆွဲဆောင်အတွက်ရှိခြင်းစိန်ခေါ်မှုအကြောင်းပြောနေတာခဲ့သည် အသစ် တိကျတဲ့ပြိုင်ကားစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ပရိသတ်တွေ။ ပြီးတော့သူကစကားလုံးကပြောသည် ... သြဇာလွှမ်းမိုးမှု.
သြဇာလွှမ်းမိုးမှု - ဇာတ်ကောင်၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု (သို့) တစ်စုံတစ် ဦး ၏တစ်စုံတစ်ရာသို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ရာ၏အပြုအမူကိုဖြစ်စေ၊ အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြစ်စေသက်ရောက်နိုင်သည့်စွမ်းရည်။
သူ့အဖွဲ့ကအသုံးပြုမှုကိုစူးစမ်းလေ့လာခဲ့သည် အမှတ်ပေး algorithms သြဇာကိုဖေါ်ထုတ်ရန်။ ထိုပရိသတ်များနှင့်လူ ဦး ရေစာရင်းဇယားအသစ်များကိုဆွဲဆောင်ရန်ဤသြဇာလွှမ်းမိုးသူများ၏အကူအညီကိုသူတို့ရယူလိမ့်မည်။ ဤသည်ငါ့ကိုအခွံမာသီးမောင်းသောစကားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းမှလူများကမူလှည့်ကွက်သည်သူတို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုမြှင့်တင်ရန်ကြီးမားသောလက်လှမ်းမှီနိုင်သောလူအချို့အားပေးဆပ်ရန်သာဖြစ်သည်ဟုယုံမှားနေဆဲပင်။ သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရန်စွမ်းရည်အကြောင်းပါ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ရောက်ရှိရုံသာမဟုတ်
ဒါခေါ်အဘယ်သူအားမျှ အမှတ်ပေး algorithms သြဇာလွှမ်းမိုးမှု အပြင်ဘက်တွင်လူတစ် ဦး ၏ ၀ ယ်မှုဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်း၏တိကျသောအတိုင်းအတာကိုပေးသည်။ ၎င်းတို့အားလုံးသည်ပရိသတ်များ၊ နောက်လိုက်များနှင့်ရှေးဟောင်းလူများကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ခြင်း (သို့) retweets များနှင့်ရှယ်ယာများပေါ်မူတည်သည်။ ရောက်ရှိ, ရောက်ရှိရောက်ရှိရန်။
ဤသည်အမြဲတမ်းရိုးရာစျေးကွက်မဟာဗျူဟာနှင့်အတူပြissueနာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့မှာကြီးမားတဲ့လက်လှမ်းမီမှုရှိပါတယ်၊ ဒါကြောင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုအချို့ကိုတိုင်းတာလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်သူတို့ဟာဘယ်တော့မှစစ်မှန်တဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်ဘယ်တော့မှအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူး သြဇာလွှမ်းမိုးမှု သူတို့တကယ်လိုအပ်နေတယ် ငါကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုဒါခေါ်ခြင်းဖြင့်လူအပေါင်းတို့သည်အချိန်တွန်းအားပေးကြည့်ပါ သြဇာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှာ ... အဲဒီအချက်အလက်တွေကိုငါ့ရဲ့ကွန်ရက်နဲ့အကြိမ်ပေါင်းများစွာမျှဝေတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါတကယ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရမှတ်များနှင့်အတူတစ်စုံတစ် ဦး ကိုပယ်အခြေခံပြီးဝယ်ယူစေပါဘူး။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီခေါင်းဆောင်ရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းဟာအရင်ကလိုအပ်တာထက်ပိုပြီးသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိပြီးသား ပရိသတ်သန်းပေါင်းများစွာ နိုင်ငံတကာကအတွက်ပျံသန်းနှင့်၎င်းတို့၏ဖြစ်ရပ်တွေ့ကြုံခံစား။ ဤရှေးရှေးသူများသည်ကံဇာတာကိုကုန်လွန်ပြီးရက်ပေါင်းများစွာ နေ၍ ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကျော်ကြားဆုံးပြိုင်ပွဲအားကစား ၀ တ်စုံနှင့်ပတ်သတ်သောဂီတ၊ အစားအစာ၊ အကြိုနှင့်ပြိုင်ပွဲအကြိုပွဲများကိုနှစ်သက်ကြသည်။
ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရရင်၊ ငါဒါတွေကိုအသုံးချဖို့ငါမဆန့်ကျင်ဘူး သြဇာ။ ဒါပေမယ့်သူတို့အမှန်တကယ်ယူဆောင်လာတဲ့တန်ဖိုးအတွက်သူတို့ကိုသုံးပါ မက်ဆေ့ခ်ျကိုသယ်ဆောင်မဟုတ်ပါ ဖန်တီးပါ။ သင်အမှန်တကယ်လူများကိုသြဇာလွှမ်းမိုးလိုပါကသင်လိုအပ်သည် ပုံပြင်တွေကိုဝေမျှပါ လူတွေဟာ ၀ ယ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမောင်းနှင်ဖို့စိတ်ခံစားမှုပိုင်းမှာပါ ၀ င်လာနိုင်တယ်။ မင်းရဲ့အဖြစ်အပျက်မှာမယုံနိုင်လောက်အောင်အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ငါ့ရဲ့အသက်၊ ဝင်ငွေနဲ့ငါ့အကျိုးစီးပွားအကြောင်းတစ်စုံတစ်ယောက်အကြောင်းပြပါ။
သန်းနှင့်ချီသောပရိသတ်များနှင့်အတူလူ ဦး ရေနှင့်စိတ်ဝင်စားမှုတိုင်းတွင်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောပုံပြင်များသန်းနှင့်ချီရှိသည်။ သူတို့ကရိုးရိုးလေးသူတို့ကိုပုတ်ကြပြီမဟုတ်! သင်၏ပရိသတ်များသည်ရုပ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုဖန်တီးမျှဝေနိုင်သည့်စွမ်းရည်ကိုဖွင့်ပြီး၎င်းတို့ကိုတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး လိုက်ရှာနိုင်စေရန်ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်လူမှုရေးဝေမျှခြင်းအတွက်မိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းများကိုခွင့်ပြုပါ။
သင့်ပရိသတ်ကိုသူတို့၏အဖြစ်အပျက်များကိုဖန်တီးရန်နှင့်မျှဝေရန်ခွင့်ပြုပါ - သို့မှသာယင်းလမ်းကြောင်းများမှတဆင့်အကောင်းဆုံးရောက်ရှိရန်ကျယ်ပြန့်စွာဝေမျှပါ။ အကျိုးသက်ရောက်မှုအများဆုံးရလဒ်များအတွက်ပုံပြင်များကိုပရိသတ်နှင့်ကိုက်ညီပါ။
Related Martech Zone ဆောင်းပါးများ
Dummies အတွက် Content Marketing ROI ကိုခြေရာခံခြင်း
ချမ်းသာကြွယ်ဝသောဖောက်သည်များသည်လူမှု ၀ န်ဆောင်မှုကိုလိုချင်သည်
စာရင်းသွင်းပါ Martech Zone သတင်းလွှာ
© Copyright 2022 DK New Media, မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး